Profaili Alumini, Oche Alumini Mpepu - Fenan
Anyị na-enyere ụwa aka na-eto kemgbe 1988
Kpọọ Nkwado 86-591-83669891
Nkwado Email zụọ ahịa@foenalu.com
Profaịlụ Aluminom Maka Ewu
Profaili Aluminom nke ulo oru
Profaili Aluminium maka Sisisiri Window na Mgbidi
Windo Mmepe Aluminom
Igwe eji etinye ọnụ na esemokwu
Aluminium n'Ọnụ orlọ Aluminom
Alumini Ileba orzọ
Alumini Mpempe Dolọ Alumini
Alumini Mgbapu Epeepe Alumini
Sistem Mgbapụta Anyanwụ
Ngwọta Ọrụ Ugbo
Ngwọta Ugwu Ogba
ANY AD ANY. EGO
Anyi na-ekwe nkwa na m bụ ọkachamara emepụtara aluminom
Tọrọ ntọala na 1988, Fujian Fenan Group ugbu a bụ nnukwu ụlọ ọrụ zuru oke, ọkachamara na mmepụta nke windo profaịlụ aluminom, tubes igwe anaghị arụ na nyocha mgbidi mgbidi. Kingnye ọkwa n'etiti China Top 5 Aluminom Profaịlụ Nsukka, Fenan otu kpuchie ebe
1,232,000 square, ụlọ 4 mmepụta (Fujian Fenan Aluminom Mmeputa Town, Henan Fenan Aluminom Mmeputa Obodo, Fenan Window System Industrial na Fujian Fenan Igwe anaghị Emeputa Nrụpụta Ihe) Fenan Group guzobere Fujian Fenan Smart W&D system Co Ltd na 20 14 ruo zụlite ma rụọ sistemụ windo & ọnụ ụzọ Fenan, wuru ụlọ O2O mbụ na ụlọ ahịa dị na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ fenan E-shop
Ọnụ ụzọ mpịachi aluminom. NAMI na ọkwa AMA kwadoro. Anyị bụ ndị otu American Architectural Manufacturers Association ma kwe nkwa afọ 10. Ọfụma dị mma na-eji ntụ ntụ na-egosi ọmarịcha ma dị nkenke. Ngwa ihe eji ama n’elu ya na ezigbo bọọlụ na -eme ka ọ dị mma na-akwalite anwụrụ ọkụ na ịrụ ọrụ nwayọ na ndụ ọrụ ogologo. Ihe omuma nka nke ihe mgbochi na nke rubebr na - egbochi gi ijigide aka nke dikwa nma.
Olọ ihe ngosi FOEN na-egosi ọtụtụ ngwa ahịa nke mepụtara iji mezuo ihe ndị ahịa chọrọ na ọnọdụ dị iche iche na ụdị ịchọ mma. anyị bụ ilekwasị anya na ọnụ ụzọ nchekwa dị elu na Windows. Emere ya na ikike ngachi eji eme ihe maka nchekwa dị elu. Site na ikike teknụzụ siri ike, teknụzụ dị elu na nke a kwadebere nke ọma, nchịkọta nke ngwaahịa, gụnyere ọnụ ụzọ na windo, mpịachi na ibo ụzọ na windo, ibo ụzọ Alumini, windo na windo, Aluminom na iko Louvres, fool windo, wdg
Fujian Foen Aluminom co. Ltd guzobere na 1988, nke dị na Fuzhou obodo China, na-ekpuchi mpaghara 1,333,000 mita nwere ndị ọrụ karịrị 3500. Anyị bụ ndị nrụpụta ọrụ ọkachamara na China na-arụpụta profaịlụ nke aluminom, windo aluminom na siste ụzọ, mgbidi mkpuchi na akara aka nke anyanwụ.
Anodized Aluminom profaịlụ T-slotted
Ihe profaịlụ nke Aluminium maka Doro Owuwu
Profaili mkpuchi Window Aluminom profaịlụ
Profaili Aluminium Mịnịstrị Ahịa ejirila rụọ ọrụ
Iche iche nke windo Anodized Agba Aluminom Pr ...
U Chanel Tube nke Aluminom mepụtara maka Industrial
Profaili Aluminium Structural na iji mmiri eji elu ya
1.25 Aluminium Tube ahaziri iche
Profaịlụ Aluminium maka sistemụ windo na mkpuchi ...
Ọ bụrụ na ịchọrọ usoro mmepụta ihe ... Anyị dị maka gị
Anyị na-ewepụta azịza ohuru maka agam n’ihu. Ndị otu anyị na - arụ ọrụ na - arụ ọrụ iji mee ka arụpụta na arụmọrụ dị ọnụ ahịa dị na ahịa
Nwee ahụmịhe n'ihi na raara onwe anyị nye, họpụtara anyị, na-ahọrọ ahụmịhe ọrụ dị iche iche. Olọ ọrụ anyị bụ onye na-eweta ọrụ agbanwe agbanwe nke R&D, mmebe, mmepụta na azụmaahịa ọrụ.
(Gbado anya na FOEN) Nchekwa nke ibo na W ...
2019 Glass -Tee International Door & ...
Mma nke ihe ohuru, ohuru ohuru o…